Uhlu lwe-imeyili yeSvalbard neJan Mayen Islands | Database lakamuva Lokuposa
Database lakamuva Lokuposa » Svalbard and Jan Mayen Islands Email Lists
Ikheli le-imeyili leSvalbard neJan Mayen Islands
Idathabheti yakamuva iqhutshwa ngekhwalithi kusukela yaqala njengoba sizama kanzima ukwakha isizinda semininingwane ye-imeyili njengesixhobo esijabulisayo kakhulu sokuletha izindlela ezinamasu nezinomthelela zemikhankaso yokuthengisa ngama-imeyili. Ngaphezu kwalokho, i-Svalbard neJan Mayen Islands Email Lists iqukethe amakheli e-imeyili aphelele wabathengi abasebenzayo nabakulungele ngakho-ke kuzoba lula futhi kube nomnotho kakhulu kuwe ukuthola ukuthengiswa kulezi set esikhulu samakhasimende.
Ukuze unikeze ibhizinisi lakho uhlu olubanzi kakhulu nolunembile lwamakheli e-imeyili atholakalayo, sinamathela kumazinga ekhwalithi efanayo njengoba senza lapho sihlanganisa uhlu lwethu lwamakheli. Uhlu lwe-imeyili ngokuvamile lufaka uhlu lwamagama, amakheli e-imeyili, kanye neminye imininingwane (njengegama lenkampani noma izinga lemali engenayo), futhi ungathola lezi zinhlu ezithengiswayo. Isixazululo sethu seDatabase Yokwengeza i-imeyili sizokwengeza amakheli e-imeyili ohlwini lwakho ukusiza ukufinyelela kumakhasimende akho ngempumelelo.
Le Svalbard neJan Mayen Islands i-imeyili ibala ithuluzi eliyingqayizivele lazo zonke izimakethe zakho ze-imeyili nezidingo zokuthengisa ngqo. Uhlu lwe-imeyili lwaseSvalbard naseJan Mayen Islands lwenza kube lula ukufinyelela emakethe yakho eqondisiwe esikhathini esifushane. Futhi izimakethe eziqondiwe ezifanele zenza kube lula ukumaketha imikhiqizo yakho kahle.
ISvalbard neJan Mayen Islands I-Database Yokukhangisa ye-imeyili
Inani lokuqopha: 105